Magacee ayay Sergio Ramos iyo Pilar Rubio u bixiyeen Wiilkooda Afaraad ee dhowaan Adduunka ku soo biiray? – Gool FM
(Madrid) 30 Luulyo 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos iyo xaaskiisa Pilar Rubio ayaa magac cusub u bixiyey wiilkooda afaraad ee dhowaan dunida ku soo biiray.
Sergio Ramos iyo Pilar Rubio ayaa go’aansaday inay wiilkooda cusub u bixiyaan ‘Máximo Adriano’, iyagoo isticmaalaya baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka.
Axaddii la soo dhaafay Kabtanka Los Blancos ee Sergio Ramos ayaa dunida ku soo dhoweeyey wiilkiisa afaraad, iyadoo xiddigaha kale ee kala ciyaara garoonka Bernabéu ay iyaguna dhowaan qaarkood Aabbe inay noqdaan filanayaan kuwo kalena ay Aabbe noqdeen.
Lucas Vázquez ayaa dhowaan Aabbe noqday, halka Dani Carvajal, Raphael Varane iyo Isco ay isku diyaarianyaan inay Aabbeyaal noqdaan.
Labadaan lammaane ee Ramos iyo Pilar Rubio oo arooskoodu ka dhacay Magaalada Seville ee dalka Spain bishii June ee 2019-kii ayaa horay u haystay saddex wiil oo lagu kala magacaabo Sergio Jr, Marco iyo Alejandro.
Xiriirka FA-ga Ingiriiska oo go'aan ka soo saaray kulanka Final-ka FA Cup-ka ee ay ku ballansan yihiin Kooxaha Arsenal iyo Chelsea
Kooxda Manchester City oo laga soo aqbalay dalabkii ay ka gudbisay Nathan Ake... (Goorma ayaa heshiiskan la dhammaystiri doonaa?)